Ajụjụ - Buddhatrends
Enwere m ike ịkwụ ụgwọ ego maka nnyefe? / Enwere m ike ịnye gị ego ahụ n'onwe gị n'ihi na enweghị m kaadị akwụmụgwọ.
M na-atụ egwu ugbu a, anyị arụmọrụ na-ejedebe na azụmahịa / debit kaadị azụmahịa na PayPal. Nke a bụ iji hụ na ndị ahịa anyị na-enweta nchedo ha ma kwadoro azụmahịa anyị. N'ọdịnihu anyị ga-enwe ike ịnakwere ego na nnyefe ọ bụ ezie. Ọ bụrụ na ịnweghị ụzọ ọ bụla nkwụnye ụgwọ dị ka kwuru na ị nwere ike ịnweta mmadụ iji nyere gị aka ịkwụ ụgwọ mbụ :)
PayPal na-enye ndị na-azụ ahịa na ndị na-azụ ahịa site n'inye ọnụ ụzọ dị nchebe na atụmatụ nkwụghachi ụgwọ dị mma. Nke a bụ ya mere anyị ji akwado na iji PayPal iji mezue azụmahịa gị n'ebe a n'enweghị nsogbu kaadị akwụmụgwọ.
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ PayPal, naanị ndenye ọpụpụ na Paypal na nbanye iji mezue zụọ gị.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na enweghị m akaụntụ Paypal ?!
Echegbula onwe gị ka ị ghara ịnweta akaụntụ PayPal ịkwụ ụgwọ: ị nwere ike tinye data data kaadị akwụmụgwọ gị na PayPal ma kwụọ ụgwọ gị. Ịọ dịghị mkpa ịdebanye aha PayPal ma ọ bụ.
1) KWESỊRỊ "KWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỌ" NKWUO BỤ AHỤRỤ
Ọ bụrụ na PayPal peeji nke dị ka ndị a, dị nnọọ pịa "Nkwụ ụgwọ na Debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ" ma ọ bụ "Lelee dị ka ọbịa".
2. BỤRỤ ihe ọmụma nke ụlọ gị
Adreesị, email & nọmba ekwentị nwekwara ike ịrịọ dabere na obodo gị.
Mgbe emechara gị, pịa "Nyochaa na Gaa n'ihu".
3. KPERE "KWU AGBA"
4. Pịa "OYE, OKWU" NDỊ A GA-EKWU EKWU NDỊ BỤ AJỤRỤ ỤLỌ. E KWESỊLA OKWU Gị!
Emela! Ị GA-EME NKWU NDỊ ỌZỌ Ị GA-EME KWESỊRỊ ỊCHỊRỤ! IGBANWE AHỤ :)
Usoro nloghachi nke anyi bu Ụbọchị 30 site na ụbọchị ị nwetara ngwaahịa ahụ (IE banye n'aka ozi nzipu ozi mpaghara gị). Ọ bụrụ na ụbọchị 30 agafeela, ọ dị mwute na anyị agaghị enye gị nkwụghachi ma ọ bụ mgbanwe.
Ọ bụrụ na mmejọ ahụ dị na anyị (agwakọta, ezughị oke na mbata), anyị ga-akwụ ụgwọ maka mbupụ njem :)
Iji bụrụ onye ruru eru maka nloghachi, ọ ga-abụrịrị na ihe ị ga-eji mee ihe ma n'otu ọnọdụ ahụ ị natara ya. Ọ ghaghị ịbụ na nkwakọ ngwaahịa mbụ.Iji mezue nloghachi gị, anyị chọrọ ka azụmahịa ma ọ bụ akaebe nke ịzụta.Biko, ezigala zụrụ azụ gị. Biko mara na nkwụghachi ụgwọ ụgwọ agaghị ekpuchi anyị. Anyị na-akwado ịnye ozi maka otu ọrụ nkwado anyị maka nkọwa zuru ezu.
Maka Order Weghachiri ajụjụ, biko kpọtụrụ anyị site na kọntaktị na saịtị anyị
Mgbe ị na-azụta ihe ị ga - enye, ị ga - enwe oge 24 iji kpochapụ iwu gị. Anyị ga-enyeghachi nkwụghachi zuru ezu ma ọ bụrụ na ị kagbuo iwu gị n'ime oge 24. Ma ọ bụrụ na awa 24 agafeela kemgbe ị mere iwu ahụ, ị ​​ga-echere ka ngwugwu gị rute tupu ị nwee ike iweghachite ha.
Ọ bụrụ na a kwadoro gị, a ga-edozi nkwụghachi gị, na akwụmụgwọ ga-etinye aka na kaadị akwụmụgwọ gị ma ọ bụ ụzọ mbụ ịkwụ ụgwọ, n'ime ụbọchị ụfọdụ dabere na onye ahịa gị.
MGBE KWESỊRỊ Ọ BỤ Ọ BỤ MGBE MGBE ỌZỤ
Ọ bụrụ na ịmeela ihe a niile ma ị ka anatabeghị nkwụghachi gị, biko kpọtụrụ anyị site na kọntaktị na saịtị anyị
Q- A koodu nzi ozi di nkpa itinye iwu mana mana enweghi m otu n'ime mba m. Kedu ka m ga - esi nye iwu?
A- Ọ bụrụ na adreesị gị enweghị koodu nzi ozi tinye obiọma "11111" ma tinye usoro gị n'usoro. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-amara na ọ nweghị koodu nzi ozi ọ gụnyere
OTÚ OTÚ A GA-EME NKWU NDỊ MGBE AHỤRỤ?
Iwu na-eburu 5 ụbọchị iji hazie tupu ha ebuo - na-ewepu ngwụsị izu na ezumike. N'oge nhazi oge ezumike nwere ike iburu 14 ụbọchị.
Kedu oge ole oge?
A ga-eziga iwu US site na USPS na iwu mba ga-eziga dabere na mmezu nke ụlọ ọrụ ahụ si n'aka.
Oge njem gaa United States: 5 - 20 Business ụbọchị
Oge agafe na International: 10 - 21 Business ụbọchị
A na-anabata oge ezipụ oge na 3 izu.
E nwere ọnọdụ ndị na-adịghị achịkwa (ọdachi ndị na-emere onwe ha, ezumike, ihu igwe, wdg) nke nwere ike ime ka mwepụ ndị mbupu. Ọ bụ ezie na ọtụtụ nchịkọta ga-abịa na oge, ọ nwere ike ịnwe ọnọdụ na nkwụsị na ndị na-ebu anyị nwere ike ịnata. N'ihi nke a, anyị anaghị ekwe nkwa inyefe oge; nnyefe nnyefe bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ mbupu.
M GA-EME NTỤTỤ NTỤRỤ?
Enwere ike izipụ ngwaahịa ọ bụla site na mmezu mmezu dị iche iche n'ụwa nile ka onye na-eme nchọpụta ngwaahịa na-etinye oge iji nweta ngwaahịa ma ọ bụ ego. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ike inye nsonaazụ maka ngwaahịa gị, ụlọ ọrụ anyị anwụrụ enyo n'ụzọ zuru ezu na nchịkọta na ihe ọ bụla furu efu ga-eburu gị n'efu.
GỊNỊ A GA-ECHI IHE A GA-ECHI
Ọrụ ozi na-adabere na etiti anyị mezuru. Nke a bụ n'ihi na ngwaahịa anyị na-esi mba dị iche iche sụgharịa iji jide n'aka na ị ga-enweta ego kacha mma maka ya. Ọrụ ndị ozi dịgasị iche iche site n'otu mba gaa n'ọzọ. Enweghị ụlọ ọrụ azụmahịa siri ike na ọrụ ozi ozi anyị enweghị ike inweta ọnụego dị ọnụ ala n'ihi ya na ngwa ngwa anyị ga-atụfu n'ahịa ahịa ụwa dịka Amazon na ihe ndị ọzọ.
Otú ọ dị, anyị ka ga-ekwenye na ị nwetara ngwugwu gị ma nye mkpuchi gị na ngwugwu gị ma ọ bụrụ na ị na-efu ma furu efu
Emere m ihe karịrị 1 ITEM, NA ANYỊ KWESỊTA ANYỊ, GỊNỊ BAỊ BỤ?
Anyị na-eme ike anyị iji belata ọnụ ahịa na njedebe gị ka i wee ghara ịkwụ ụgwọ ụtụ isi na ụtụ isi maka inweta ihe gị! Ọ bụrụ na ị na-etinye iwu na anyị maka ọtụtụ ihe ọ bụ karịa ka ọ ga-esi na-eziga na ihe karịrị otu ngwugwu. Biko mee ka oge ụfọdụ maka ihe niile ị ga - abata.
M GA-EKWU ỤBỌRỤ ỤLỌ Ọ BỤ Ọ BỤ ỤLỌ ỤLỌ ỤBỌRỤ NKE ỤBỌRỤ?
Ọnụahịa kpughere na akwụkwọ azụmahịa gị MIGHT dị iche na ihe ị nyere iwu kama biko echegbula onwe gị! Ugboro ihe ihe imezu anyị ga-eme bụ iji akara dị oke ọnụ ala ma ọ bụ jiri akara dị ka onyinye zuru oke. Nke a bụ igbochi ọnụahịa / omenala mbubata na-eweta na njedebe gị maka ụfọdụ mba ndị ọzọ ebubo ndị a dị oke ọnụ.
M BỤRỤ MGBE MGBE M BỤGHỊ NTỤTA IHE EMAIL ... GỊNỊ NA-ECHI?
Biko jide n'aka na email gị ziri ezi mgbe ị debere iwu. Jiri nlezianya lelee nchekwa SPAM gị iji hụ ma ọ bụrụ na e zigara email gị. Ọ bụrụ na e nweghị ozi nkwenye ọ bụla, biko zigara otu ụlọ ọrụ nkwado anyị site na mpempe akwụkwọ na saịtị anyị
GỊNỊ Ọ BỤRỤ na M BỤGHỊ Ụlọ N'ỤLỌ NCHE?
Onye ọ bụla nọ n'ụlọ nwere ike ịnweta ngwugwu ahụ maka onye ahịa. Ọ na-abụkarị onye na-ede akwụkwọ ozi ga-ahapụ nchịkọta nchịkọta ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye nọ n'ụlọ ma ị nwere ike ịnakọta ngwugwu gị na ụlọ ọrụ nzipu kachasị dị gị nso.
Achọrọ M ịgbanwe ỤWA / ADDRESS, M nwere ike?
Ọ bụ ezie na anyị na-agba gị ume nke ukwuu ịlele nyocha na ọnụọgụ abụọ tupu ị debe anyị n'usoro, anyị ghọtara nke ọma na ihe nwere ike ime ma mehie. Anyị na-ahazi iwu otu ụbọchị a na-edebe ha. Ọ bụrụ na a ghaghị ịgbanwe mgbanwe gị n'usoro iwu gị biko kpọtụrụ anyị site na kọntaktị ahụ na saịtị anyị ASAP ma anyị ga-eme ike anyị niile iji nweta mgbanwe ahụ, mana anyị enweghị ike ime nkwa ọ bụla. Ọ bụrụ na e zigara ihe (s) ahụ site na ebe mmezu anyị, anyị agaghị enwe ike ịgbanwe. N'okwu ahụ, ịnwere ike iziga ihe na-ezighị ezi gaa na Ụlọ Nzukọ Ugwu kachasị nso ma ozugbo a natara anyị nwere ike izipu ihe edoziri. Biko kpọtụrụ anyị ka anyị chọpụta ebe dị nso na Ụlọ Nzukọ Alaeze kacha nso na mba gị.
Enwere M AJỤJỤ NA NDỤ MGBE Ọ BỤRỤ N'ỤLỌ NCHE GỊ EBEGHỊ ANYỊ NA-EME YA, Kedu ka m ga-esi jide gị?
Biko kpọtụrụ anyị na anyị ga-enwe obi ụtọ ịza ajụjụ ọ bụla nke ajụjụ gị :)